Trevy? | mandimby maharo
Posted on 28 December 2012 28 December 2012 by Mandimby Maharo
ROMBO! Tsy ilay fanentanana fanaon’i Deba akory no tiana ho lazaina eto fa ilay fihetsika ataon’ireo mpanohana ny Fat Andry Rajoelina tao anatin’ny herinandro izay. Na dia nilaza fa hampitsahatra ny adilahy politika amin’izao fety izao aza manko ity lohan’ny Fat ity dia tsy izany no hita. Mifandrombaka manao rombo mamely (mitakasika hoy ny tenin-jatovo) ireo izay manao tsikera ity filohany ity ireo manodidina azy. Fihetsiketsehana 4 no nanamarika izany.
Voalohany: ny namalian’ny minisitry ny fitatananam-bola fa vola 100 tapitrisa dolara an’ny malagasy madiodio azo avy amin’ny Fampiasambola nomen’ny orinasa sinoa Wisco, mitrandraka ny vy ao Soalala no nananganana ireny Coliseum, kianja Makis sy ny karaman’ny mpilalao baolina lavalava, Hopitaly “manarapenitra” rehetra ireny. Tsy nisy antsimpirihany ny amin’ny tetibidy sy izay mangarahara teo amin’ny tolo-bidy tamin’ny nahazoan’ireo orinasa ny fanamboarana izany. Nionona tamin’ny hoe mety sy mitsinjo ny vahoaka ny filohan’ny tetezamita raha namoaka ny didy 006-2010 tamin’ny 6 septambra 2010 namaritra ireo asa ireo. Tsy manan-jo hanaiana izany ny praiministra ankehitriny satria mbola tsy nitana io toerany io izy tamin’izany fotoana izany.
Faharoa: niombo-kevitra tanteraka amin’ity minisitra ity moa ireo avy ao amin’ny federasionan’ny baolina lavalava sy ireo mpilalao ao amin’ny XV Makis de Madagascar. Naneho ny heviny momba ny fandraizan’izy ireo karama manopmboka izao izy ireo ary nanasoaso ny fitondrana tetezamita fa mahavita manampy ny fanatanjahatena malagasy. Naverina indray fa nahazo fandresena taty afrika ity ekipam-pirenena ity ka mendrika ny homena vola.
Fahatelo: “niainga masiaka” koa ireo mpikarama an’ady politika sy mpanao taty reraka tetsy amin’ny Louvre Antaninarenina. ‘Tokony hametra-pialana ny praiminisitra fa tsy mahavita azy”. Tsitra sady mivantana toy izay no namaliny an’ingahy Beriziky. Mitsipaka ny tsindry ataon’ny Sadc amin’ny tsy tokony hirotsahan’ny Fat ho filoha ireto mafana fo ireto. Tsy mitombina hoy izy ireo ny NI-Ni. Ary hanao izay hirotsahan’ny Fat amin’ny fifidianana izy ireo ka hanohana azy.
Fahefatra: nitaraina ireo mpanenjika dahalo any atsimo fa tsy misy fampaherezana azony mihintsy fa kihana foana no henony. “Mafy ny ady fa tsy araka izay noheverina. Manampy trotraka koa ny tsy faampian’ny fitaovana. Tsy manao vono moka izany izahay fa dahalo ireny maty ireny”. noho ireo dia mangataka ny fanphanana avy amin’ny vahoaka ireo mpitandro filaminana ireo. Tsy tokony hisy ny fifanankianan’ny samy mpitondra hoy izy ireo namaly ny praiminisitra koa, satria ity farany dia manohana ny fanadiadina nataon’ny vondrona iraisam-pirenena.
Ireo rehetra ireo no mampametra-panonaniana ny olo-tsotra toa anay. Ny fitondrana fanazavan tsy midika fa madio sy marina avokoa ny zavatra natao, hoy ny oham-pitenenana vahiny. Raha nanana 100 tapitrisa avy amin’ny Wisco ve isika dia ireny no nahamaika fa tsy izay nampihenana ny fahantran’ny olona, ka miatomboka eo amin’ireo mponina any Soalala izay manakaiky ny mpanome vola no lohalaharana. Iarahana manaiky fa mendrika toerana hilalaovany ny mpanao baolina lavalava ary mendrika hanana toerana hampandihizany ny valahiny ny mpanao salegy, ary tokony hanara-penitra ny fitsaboana ireo mararin’ny tsy fanharian-tskafo. Saingy hisioka ve isika nefa tsy mbola tafavoaky ny alan’ny tetezamita?
Ny volana septambra 2010 no nanapa-kevitra ny handany vola amin’ny fotodrafitrasa ny Fat. Voalazan’ilay lalana nefa ny fanatanterahana ny fifidianana no laharampahamehan’ny governemanta. Naninona ary no tsy notanterahina izany fa nitady hevitra hatrany hialana? Satria ve tsy mbola nisy zavabita ho tokanana ka ho entina handemen-tsaina ny malagasy? Tsy ny Makis iany koa anie no manana amboara afrikana fa maro ireo mpanao fanatanjahan-tena no manana medaly ambony eto, saingy tsy mandray karama isam-bolana ireny. Fa ny Makis moa 15 isa sady bokon’ozatra be daholo koa iza no ho sahy hiady varotra aminy eo? Amiko, vavan’ny may volotratra ireny rehetra ireny. Tsy manana lanja politika ireo milaza azy fa misolo vava ny vajoaka notendrena ireo ka satriny aza hihitatra hatrany ny fanjakan’ny baroa. Kelilahy mangata-bady ireo ka ny anaran-joky ny ieboeboana. Anisan’ireo nieboebo ho manampahaizana sy mafy anie ry zalahy lasa any atismo ireny fa tsy mbola milamina aloha ny tany hatreto. Na dia amin’ny anaran’ny vahoaka malagasy aza no nanirahana azy any dia tsy afaka ny hiray tsikombakomba amin’ny izay fihoaram-pefy ataony ny olona rehetra. Tompom-pahefana sy be galona izy ireo no manao ny asa ao ka afaka ny hanao ny asany tsara.
Tetika efa fanaon’ny ao amin’ny Fat rahateo izao mody mangina fa mampihetsika ny tompomenakely sy ny mpaka 19 rehetra izao ka ilazana fa “noho ny hetahetam-bahoaka” no andraisana izao fanampaha-kevitra tiana hametrahana ny jadona izao. Aza gaga ary ianao raha iteny ingahy Andry Rajoelina fa hirotsaka ho fidina mba ho fiarovana ny tombotsoananao, ka ho alefany sms any amin’ny Sadc izany heviny izany.
Tags: Manarapenitra, Omer Beriziky, politique, TsikeraCategories: politique
3 thoughts on “Trevy?”
28 December 2012 at 1402 50
miombokevitra @ Mandimby tanteraka aho mikasika ny fandanina ireo 100 millions de dollars. Fa nga moa an’ny Filoha Fat iny vola iny no izay tiany anaovana azy no atao. mitovy @ilay resaka Force 1 ihany io. satria ve izay no itan’ny mpitondra fa mety hahasoa ny vahoaka na mety hahasoa ny kitapombolam-panjakana dia tonga dia manapakevitra avy atrany izy ; tsy mila maka ny hevitry ny solombavabahoaka akory farafaha ratsiny! izay ilay lazaintsika hoe JADONA!!
Ary inona moa no afaka ataon’ny vahoaka raha milaza avy hatrany ny miaramila fa i Andry Rajoelina no apetrany ho filoha @ 4e Republique na dia tsy hanao fifidianana intsony aza isika? Angamba tsy afaka ny aninona @zany isika satria atody miady amam-bato. Mbola tsy lany t@ fomba demokratika akory ve dia efa mifikitra mafy @seza norobahina! Ataoko fa tsy azo ekena ny ijanonan’ny olona tahak’izany eo @fitondrana satria tsy ho afaka eo intsony izy raha tsy ra mandrika. samia meritreritra !
2 January 2013 at 1806 55
Loza ‘zany marina mafy! andiana mpanao rugby indray ‘zany izao no andeha hitokona eny @13mai na Anosy @ty 2013 ity hanongana izay ho avy eo raha tsy manao izay ampanantenain’ity FAT ity ‘zay eo?! Anefa ity tetezamita ity ka dia miteny2 foana hampiteny ny moana. Ny fiara miasa mivezivezy eto Antananarivo ‘zao no tokony efa hahena ny isany fa tsy mainka hampiana ireto vita sinoa ho avy. Ny Fourrière no andeha atao manara-penitra atsy ho atsy e! na dia hanalàna ireny manao ny trottoir ho garage-ny ireny fotsiny aza.
Pingback: Izay azo raisina amin’ny kabarin’ny Fat. | mandimby maharo